Bill Gate oo Somaliland ku amaanay habka isku dirida ama xawilaadda lacagaha ee Zaad-ka Telesom ka samaysay Somaliland Microsoft Founder, Bill Gates Praise Telesom for Its Mobile Money Banking and Transfer Service | Somaliland Hargeisa City
Bill Gate oo Somaliland ku amaanay habka isku dirida ama xawilaadda lacagaha ee Zaad-ka Telesom ka samaysay Somaliland Microsoft Founder, Bill Gates Praise Telesom for Its Mobile Money Banking and Transfer Service
27 October, 2014 — somaliland1991
Waa markii ugu horreysay, ee nin maalqabeen ah ama ah dadka dunnida ugu caansan uu khudbadiisa ku soo daro Somaliland. Runtii waa farxad weyn, waana guul weyn oo u soo hoyatay guudahaan Somaliland.
Waxaa muddooyinkii u danbeeyey soo badanayey dadyawga dunnida ku nool ee Somaliland wax ka qora, booqasho ku imanaya , warar ka soo diraya (warbaahinta kala duwan ee caalamka), xidhiidh siyaasaeed, dhaqaale ama ganacsi la samaynaya Somaliland. Waxaana sii kordhay cilaaqaadka ay Somaliland la leedahay dunnida inteeda kale. Imika waxa ay arrintu maraysaa, in qofka soomaaliga ah la yidhaahdo , ma Somaliland baad ka timid mise Somalia.
Su´aashan oo ay inta badan dadka ajnabigu waydiiyaan qofka soomaaliga ah ee dalalkooda kunool.
Halkan ka daawo video-gaas u Bill Gate , maalqabeenka adduunka ugu taajirsan, oo ah nr 1, (Forbes) oo Somaliland ka hadlaya!!
S. Cadnaan X. Ismaaciil
« Madaxweynaha Somaliland oo xadhiga ka jaray dhismaha cusub ee wasaaradda xanaanada Xoolaha
Xukumadda dalka Sweden oo ictiraaftay Falastiin »